Ngaleso sikhathi samanje ukuhlangabezana clove kungaba cishe kuwo wonke engadini. Lokhu akusona isimanga. Phela, leli ebukekayo imbali abatshali ennoble amasayithi abo. Uhlobo lwembali enephunga elimnandi izimbali ukudala imingcele umbukwane aluhlaza, abe nokugqamisa ezimibalabala kuya zezimbali kanye rock izingadi.
Awunika igama lokuthi lesi sitshalo futhi lisuselwa emagameni amabili lesiGreki «Di» futhi «anthos», olokuqala okuhunyushwa ngokuthi uZeyusi (Nkulunkulu), kanti eyesibili - imbali. Ngakho-ke, leli gama lingase lihunyushwe ngazo, nokuthi uZeyusi imbali noma njengendlela imbali saphezulu.
Uma sicabanga ngakho konke izimbali, clove kule ukwehluka isitshalo kwesokudla, esesikhundleni lenqwaba izakhiwo ezibalulekile. Ngaphezu kwalokho, it has a zezimbali ophanayo, ngokuchichima womumo anemibala egqamile. Izimbali ngokwabo kungaba kokubili ezinkulu (ngezinye izikhathi ubukhulu ifinyelela ngamasentimitha ambalwa) nabancane kakhulu (pinnate uhlobo lwembali enephunga elimnandi).
Namuhla siyazi ka-300 zezinhlanzi yayo. Futhi endaweni udumo kufaneleka Dianthus barbatus phakathi ezihlukahlukene yokuthi has iphunga elimnandi. Etshalwayo ke njengoba biennial. Ekuqaleni (onyakeni wokuqala) Kumiswa nge rosette amaqabunga. Kodwa lolu hlobo ngonyaka wesibili ejabulisa zezimbali obuningi.
Uma sikhuluma inqubo yokukhula, lesi sitshalo lezi zimbali kungaba futhi betshala ngqo ngqo emhlabathini, futhi ngokusebenzisa izithombo. Ngaphambi ayihlwanyelayo (ukugwema izifo isitshalo) inhlabathi Kunconywa ukuba baphonse esishisayo (ngokuqinisekile!) Isixazululo potassium permanganate.
Ukuhlwanyela imbewu for izithombo kuyadingeka ngoMashi noma ekuqaleni kuka-Ephreli. Kodwa kakade okuhlwanyela ekhanyayo akudingeki kuze May noma ngisho Juni. Lapho leli cebo sisetshenziswa 5x5 cm. Ukuze zithole imiphumela emihle, kubalulekile ukuba afeze mulching izilimo. Ukuze wenze lokhu, kudingeka uhlanganise izingxenye alinganayo isihlabathi kanye nokhuni umlotha.
Izithombo kufanele ungene. Kodwa abasha uhlobo lwembali enephunga elimnandi Turkish ngasekupheleni kwehlobo batshala ezindaweni pretreated. Ngakho kubalulekile ukuba unamathele ibanga 25 cm phakathi kwezitshalo. Ekupheleni konyaka sezihlahla yesibili, kwakheka ngonyaka wokuqala, lafinyelela ukuphakama mayelana 50 cm. Futhi phakathi nonyaka ka-Juni kukhona ezinkulu efihlekile elimnandi.
Futhi eveza vegetatively kanye clove. Ukuze wenze lokhu, amahlumela ethanda ezihlukahlukene kuleli ngasekuqaleni kuka-Agasti, egoba emhlabathini, ukuvikela izikhonkwane nomhlabathi prisypaya. Ukuze tie isikhonkwane ekupheleni engenhla stem ukuqinisekisa isikhundla salo njalo mpo.
Ngemva cishe 2-3 amasonto ka ISIZINDA kwakheka izimpande, futhi ngemva kwezinye isikhathi esengeziwe - amaqabunga, bese - amahlumela. Futhi kakade kunezimpande abagijimi kulesi simila umama inqanyulwa kanye autumn is imali.
Ngaphezu kwalokho, ama-clove izinhlobo Turkish kanye cuttings, okuyinto bafa kusukela akubangelwa yakha inflorescences. Watshala ngonyaka wokuqala, ngonyaka wesibili, they jikisa ehlathini abafika kwabangu-10 cm. Bangaphinde abangu ngokuphepha ekwindla.
Lezi izimbali zikhule hhayi kuphela e ilanga. Banomuzwa ezinhle penumbra. Ngu hlobo inhlabathi ngikhetha. Nakuba ziba kangcono loams ukukhanya, lapho evelele ukuphendula kancane acid noma hlangothi. Clove abatshalwé wokubukisa ngamaqembu ahlukene.
Lezi zimbali zidinga yesondlo little. Kodwa ingozi enkulu ngabo izinambuzane ezahlukene, phakathi lapho, njengoba umthetho, yizimbuzane noma aphid. Ngakho-ke, lapho kutholwa, kumele kuthathwe izinyathelo ngokushesha.
Ukuze wenze lokhu, sebenzisa ukumnika amaqabunga amazambane. Phakathi namahora angu-36 kubalulekile ukugcizelela 1 kg fresh (green) noma 0.5 kg amahlamvu ezomile (amahlamvu ngempela) e 10 amalitha amanzi. Khona-ke kubalulekile ukuze ungeze liquid insipho (1st. L.). Futha kangcono kusihlwa noma ekuseni amahora.
Kodwa clove Turkish kungaba kuncike lihlaselwa amagundane. Ukugcina lesi sitshalo, kubalulekile imiBhalo namagundane eduze emasimini ukusakaza ushevu ukudla okuhlukahlukene. Futhi esikhathini ebusika (ikakhulukazi phakathi ncibilika) kufanele kube ohlangene, unyathele leliqhwa elikhithikayo livela iziqu izitshalo.
Izitshalo yemifino cultured: izinhlobo kanye nezici
Aloe: ukukhiqizwa kabusha ekhaya, ikakhulukazi ukunakekelwa futhi kulinywe
Iseluleko balimi abanolwazi: indlela ukulungiselela seedbed for strawberry
Beautiful petunia: zokutshala nokunakekela
Umlingisikazi Sidorenko Oksana Yurevna: Biography, ukuphila siqu. izindima engcono
Jacobin - ke ... Yemfihlo futhi ubushiqela we Jacobins
Klay Thompson: umsebenzi, izibalo, impumelelo
Ihhotela "Villa Fellini," Sudak: ngezibuyekezo nezithombe
Isihlakala Sore: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa
Oyisangoma Baba shura kusukela Abdulino: Ikheli lapho ithola
"Cabinetmaker" (umnyango): ukubuyekezwa. iminyango Interior "cabinetmaker"
Recipe 'ushizi ikhekhe' zonke izinyo elimnandi
Isigaba 30 se-Criminal Code, ingxenye 3: Izici